अनुच्छेदहरूका लागि ढाँचा शैलीहरू प्रदर्शन गर्दछ। उस्तैढाँचा लागू गर्नलाई अनुच्छेद शैलीहरू प्रयोग गर्नुहोस्,जस्तै फन्ट,क्रमाङ्कन र तपाईँंको कागजात भित्र अनुच्छेदहरूमा सजावट।
क्यारेक्टरहरूका लागि ढाँचा शैलीहरू प्रदर्शन गर्दछ। एउटा अनुच्छेदमा चयन गरिएको पाठमा फन्ट शैलीहरू लागू गर्नलाई क्यारेक्टर प्रयोग गर्नुहोस्।
ढाँचाका लागि ढाँचा शैलीहरू प्रदर्शन गर्दछ। फ्रेम लेआउटहरू र स्थिति ढाँचा गर्न फ्रेम शैलीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
पृष्ठहरूका लागि ढाँचा शैलीहरू प्रदर्शन गर्दछ। हेडर र फुटरको अवस्थिति समेत गरी,पृष्ठ सजावटहरू निर्धारण गर्नलाई पृष्ठ शैलीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
संख्यात्मक र बुलेट गरिएका सूचीहरूको लागि ढाँचा शैलीहरू प्रदर्शन गर्दछ। सूची शैलीहरू नम्बरहरू र बुलेट क्यारेक्टर ढाँचा गर्न र इन्डेन्ट निर्दिष्ट गर्न प्रयोग गर्नुहोस्।
बढी आदेशहरू सँग उपमेनु खोल्नुहोस्.
हालको अनुच्छेद, पृष्ठ, वा चयनमा आधारित ढाँचामा नयाँ शैली निर्माण गर्नुहोस्.
अरू कागजातबाट शैलीहरू आयात गर्न लोड शैलीहरू खोल्नुहोस्.
शैलीहरू को बारे अधिक जानकारी।